UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay Duqeyn culus oo ka dhacday G/Bari | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay Duqeyn culus oo ka dhacday G/Bari
UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay Duqeyn culus oo ka dhacday G/Bari
Isku-Shuban (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya deegaanno hoos yimaada degmada Isku-shuban ee gobolka Bari ayaa sheegaya, in diyaarado dagaal ay duqeymo culus ka geysteen saldhigyo ay halkaasi ku leeyihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo Daacish.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka maamulka Puntland ayaa xaqiijiyay in duqeynta lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan Daacish.
Sidoo kale, duqeynta ayaa ka dhacday nawaaxiga tuulada Cameyra oo ay ku sugan yihiin Daacishta ku sugan degaanada maamulka Puntland.
Wararka ayaa intaasi ku daraya, in diyaaradahaas Gantaallo ku garaaceen saldhig ay leeyihiin Ururka Daacish.
Ilaa iyo hadda lama oga Khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeyntaasi.
Diyaaradaha Dagaalka Mareykanka iyo kuwa Kenya ayaa inta badan ka fuliya weerarada cirka ah oo inta badan lala beegsado goobaha ay ka taliyaan maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo Daacish ee Soomaaliya.
weerar dhanka cirka ah